Naya Post Nepal | बालेन र, केशब स्थापितलाइ लाग्यो ठूलो झट्का को हुन यी युवक काठमाडौंको मेयर उम्मेदवार ? हेर्नुस पूरा विवरण..
बालेन र, केशब स्थापितलाइ लाग्यो ठूलो झट्का को हुन यी युवक काठमाडौंको मेयर उम्मेदवार ? हेर्नुस पूरा विवरण..
काठमाडाैँ । मुलुक स्थानिय निर्वाचनको सर्मागर्मीको माहाेलमा छ । आम जनतामा कुनै राजनीतिक दल वा दल विशेष चासो हुन स्वाभाविक हो । तर यो समय राजनीतिक दलहरु प्रतिको तिब्र बितिष्णाको माहाेल देख्न सकिन्छ । नागरिक स्तरबाट स्वतन्त्र रुपमा परेका उम्मेदवारीहरु यसको जलन्त उदाहरण हुन् ।
कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेरदवारहरु राजनी तिक दलहरु लाई नै चुनौतिका बनेका छन् । काठमाडौँमा सुमन सायमी, बालेन शाह, देखि पोखरामा गनेस पौडेल, बनेपामा बिरोचन श्रेष्ठ केही उदाहरण मात्र हुन् ।
स्वतन्त्रतर्फ वडा अध्यक्षमा ६, सदस्यमा १६, महिला सदस्यमा ८, दलित महिला सदस्यमा ४ जना गरी ३४ निर्विरोध निर्वाचित भई सकेको निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ ।
कुल ५५ जना मेयरको प्रत्यासी रहेको काठमाडौँ महानगरपालि कामा धेरै चासोका रुपमा हेरिएको छ । एमाले तर्फका उम्मेरद वार केसब स्थापित मनोनयन संगै विवादमा तानिएका छन्।
भने गठबन्दन तर्फबाट सिर्जना सिङको यस अघिको योगदा नबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राप्रपाबाट मदनदास श्रेष्ठ लगायत छन् । स्वतन्त्र तर्फ बालेन शाह तथा सुमन सायमीको धेरै चर्चा छ ।
र्‍यापर बालेन शाहको मिडिया चर्चा धेरै सुनिन्छ । तथापी काठमाडौँबासिका असली समस्या कस्ले बुझेको छन् ? वा बुझ्न सक्ला भन्ने प्रमुख प्रश्न हो ।
काठमाडौँको संस्कृति संरक्षणका अग्राणी अभियान्ता हुन सुमन सायमी । उनी संगै स्वतन्त्र तर्फ उपमेयरमा बिध्या श्रेष्ठले उम्मेद वारी दिएकी छन् ।
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितीको अध्यक्ष साथै उपत्यका सरोकार मञ्चक अध्यक्ष हुन सायमी । उनि एक दशक देखि काठमाडौँका समस्यालाई नियाल्दै आएका अभियान्ता हुन् ।
सायमीले सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा आफ्नो आवाज निरन्तर उठाइ रहेका छन् । उनले काठमाडौँ भित्र हुने गरेका विभिन्न समस्यालाई मध्यनजर गरी कसरी आफ्नो परापुर्वकाल देखी चलिआएका तथा रहिआएका हरेक ठुला साना जात्रा पर्व, संस्कृति, परम्पराहरुलाई संरक्षण गर्ने भन्ने कुरालाई जोड दिएका छन् ।
एक दशकदेखि काठमाडौँको अस्तित्व बचाउने अभियन्ता सायमि सहरको व्यवस्थापनको लागी फोहोर व्यवस्थापनको सपना लिएका छन् ।
उनी भन्छन साना साना कुराहरुको व्यवस्थापन गरे उपत्यका मा मनोरेल, स्मार्ट सिटीको आवश्य कता नरहेको बताउछन् । किनकी स्मार्ट सिटि को कारण उत्पादशील भुमि नष्ट हुने उनको तर्क छ ।
गैरन्यायिक सडक विस्तार विरुद्धको नेतृत्व देखी सम्पदा संर क्षण, खोकनाको कृषि भुमि संरक्षण आन्दोलन लगाएत अन्य विभिन्न राजधानीका समस्याहरुमा आफ्नो फ्रन्टलाइनमा बसेर जेल समेत बसेका छन ।
सायमीले परापुर्वकाल देखी मान्दै आएको मठ मन्दिर विहार बाहास् बही, ननी, चुक, गुम्वा, चैत्य, पाटी पौवा फल्चा, गुठी, भाषा, लिपि, जग्गा जमिन र थाक थलो सुरक्षामा लाग्दै आएका अभियान्ता हुन् ।
यस स्थानिय निर्वाचन मार्फत उनले जनताको लागि काम गर्ने अठोट लिएका छन् । उनले गैरकानुनी रुपमा विस्तार गरिएको रोडको मुद्धा लडेर नयाँ नजिर स्थापित गरेका छन् ।
साथै उनले भाषा, सस्कृती, मठ मन्दिर गुठी संरक्षण गुठी बि रुद्ध आन्दोलनमा अग्रस्थानमा रहेर नेतृत्व गरेकाले आफुलाइ काठमाडौँबासीले मेयर जिताउने अपेक्षा राखेका बताउछन् ।
२०७९ बैशाख २१, बुधबार प्रकाशित0Minutes 701 Views